लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षमा भोट हाल्ने मात्र होइन - डा. बाबुराम भट्टराई - Baikalpikkhabar
लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षमा भोट हाल्ने मात्र होइन – डा. बाबुराम भट्टराई
धादिङ / नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्र भनेको ‘पाँच वर्षमा भोट हाल्ने कार्य मात्रै होइन’ भनेका छन् । जनसंवाद यात्रा अन्तर्गत सोमबार धादिङको सल्यानटारमा आयोजित अन्तर्क्िरया कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
मङ्गलबार, २९ माघ, २०७५, बिहानको ११:२१ बजे